Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 13:1-58
13 Pazuva iroro Jesu akabva pamba, akanogara pedyo negungwa. 2 Uye vanhu vakawanda vakamuunganira, zvekuti akatokwira muchikepe ndokugara pasi uye vanhu vese vakanga vakamira pamhenderekedzo.+ 3 Akabva avaudza zvinhu zvizhinji achishandisa mifananidzo,+ achiti: “Mumwe mudyari akaenda kunodyara.+ 4 Paaikusha mbeu, imwe mbeu yakawira parutivi pemugwagwa, shiri dzikauya dzikaidya yese.+ 5 Imwe yakawira pane matombo pakanga pasina ivhu rakawanda, uye yakabva yangomera nekuti ivhu racho rakanga risina kudzika.+ 6 Asi zuva parakabuda yakatsva, ikaoma nekuti yakanga isina midzi. 7 Imwe yakawira muminzwa, minzwa ikakura ikaivhunga.+ 8 Imwe yacho yakawira paivhu rakanaka, ikatanga kubereka zvibereko, iyi zvakapetwa ka100, iyo ka60, imwe ka30.+ 9 Ane nzeve ngaanzwe.”+ 10 Saka vadzidzi vakauya vakati kwaari: “Munotaurirei navo muchishandisa mifananidzo?”+ 11 Akapindura kuti: “Imi makapiwa kunzwisisa zvakavanzika zvitsvene*+ zveUmambo hwekudenga, asi ivo havana kupiwa kunzwisisa. 12 Nekuti munhu wese anazvo, achawedzerwa zvimwe, uye achaitwa kuti ave nezvizhinji; asi munhu wese asina, achatorerwa kunyange zvaainazvo.+ 13 Ndokusaka ndichitaura navo ndichishandisa mifananidzo; nekuti vanotarisa, asi vachitarisa pasina, uye vanonzwa, asi vachinzwa pasina, uyewo vasingabati zviri kutaurwa zvacho.+ 14 Uye uprofita hwaIsaya huri kuzadzika kwavari. Hunoti: ‘Kunzwa muchanzwa, asi hamuzombobati zviri kutaurwa, uye kutarisa muchatarisa, asi hamuzombooni.+ 15 Nekuti mwoyo yevanhu ava haichateereri, uye nzeve dzavo dzakanzwa asi havana zvavakaita, uye vakatsinzina maziso avo, kuti varege kuzomboona nemaziso avo uye kunzwa nenzeve dzavo vachibata zviri kutaurwa zvacho nemwoyo yavo, votendeuka, ndovaporesa.’+ 16 “Asi anofara maziso enyu nekuti anoona uye nzeve dzenyu nekuti dzinonzwa.+ 17 Nekuti chokwadi ndinoti kwamuri, vaprofita vazhinji nevanhu vakarurama vaida kuona zvinhu zvamuri kuona asi havana kuzviona,+ uye kunzwa zvinhu zvamuri kunzwa asi havana kuzvinzwa. 18 “Chiteererai mufananidzo wemunhu akadyara.+ 19 Kana munhu akanzwa shoko reUmambo asi orega kubata zviri kutaurwa, akaipa+ anobva auya obvuta chakadyarwa mumwoyo make; iyi ndiyo iya yakadyarwa parutivi pemugwagwa.+ 20 Kana iri iya yakadyarwa pane matombo, uyu ndiye anonzwa shoko obva arigamuchira nemufaro.+ 21 Asi iye haana midzi uye anotomboenderera mberi kwekanguva, asi kana pakamuka dambudziko kana kuti akatambudzwa pamusana peshoko, anobva agumburwa. 22 Kana iri iya yakadyarwa muminzwa, uyu ndiye anonzwa shoko, asi kuzvidya mwoyo nezvinhu zvemunyika ino*+ nesimba rinonyengera repfuma zvinovhunga shoko, rotadza kubereka zvibereko.+ 23 Kana iri iya yakadyarwa paivhu rakanaka, uyu ndiye uya anonzwa shoko achibata zviri kutaurwa zvacho, obereka zvibereko, uyu zvakapetwa ka100, uyo ka60, uye mumwe ka30.”+ 24 Akavataurirazve mumwe mufananidzo, achiti: “Umambo hwekudenga hunogona kufananidzwa nemunhu akakusha mbeu yakanaka mumunda make. 25 Vanhu pavakanga vakarara, muvengi wake akauya akakushawo masora pakati pegorosi racho, akaenda. 26 Dzinde parakakura rikabereka zvibereko, masora akabva aonekawo. 27 Saka varanda vatenzi wemba vakauya vakati kwaari, ‘Tenzi, hamuna kudyara mbeu yakanaka here mumunda menyu? Saka sei mava nemasora?’ 28 Iye akati kwavari, ‘Mumwe munhu, muvengi, akaita izvi.’+ Varanda vakamupindura kuti, ‘Saka munoda here kuti tiende tinoadzura?’ 29 Iye akati, ‘Aiwa, ndinotyira kuti pamunenge muchidzura masora mungazodzurawo negorosi. 30 Regai zvikure pamwe chete kusvikira pakukohwa, uye mumwaka wekukohwa ndichaudza vakohwi kuti: Tangai kudzura masora muasunge mwanda kuti apiswe; mozounganidza gorosi muchiisa mudura rangu.’”+ 31 Akavataurirazve mumwe mufananidzo, achiti: “Umambo hwekudenga hwakafanana netsanga yemasitadhi yakatorwa nemumwe murume akaidyara mumunda make.+ 32 Iyi ndiyo inotova mbeu diki pane dzimwe dzese, asi painenge yakura, ndiyo huru pazvirimwa zvese uye inova muti, zvekuti shiri dzekudenga dzinouya dzowana pekugara mumapazi emuti wacho.” 33 Akavaudza mumwe mufananidzo achiti: “Umambo hwekudenga hwakafanana nembiriso yakatorwa nemumwe mukadzi, akaisanganisa nezviyero zvikuru zvitatu zvefurawa, kusvikira mukanyiwa wese wavira.”+ 34 Jesu akaudza vanhu zvinhu zvese izvi achishandisa mifananidzo. Aisambotaura navo asingashandisi mufananidzo,+ 35 kuti azadzise zvakataurwa nekumuprofita uya akati: “Ndichashama muromo wangu ndichishandisa mifananidzo; ndichazivisa zvinhu zvakavanzwa kubvira pakutanga.”*+ 36 Paakanga aita kuti vanhu vaende, akapinda mumba. Vadzidzi vake vakauya kwaari vakati: “Titsanangurirei mufananidzo wemasora ari mumunda.” 37 Akavapindura kuti: “Mudyari wembeu yakanaka Mwanakomana wemunhu; 38 munda inyika.+ Kana iri mbeu yakanaka, ava vanakomana veUmambo, asi masora vanakomana veakaipa,+ 39 uye muvengi akaadyara ndiDhiyabhorosi. Kukohwa kuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva iyoyo,* uye vakohwi ingirozi. 40 Saka sekungounganidzwa kunoitwa masora opiswa nemoto, ndizvo zvazvichava pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva iyoyo.*+ 41 Mwanakomana wemunhu achatuma ngirozi dzake, uye dzichaunganidza dzichibudisa muUmambo hwake zvinhu zvese zvinogumbura nevanhu vasingateereri mutemo, 42 uye dzichavakanda muvira remoto.+ Imomo ndimo mavachachema vari vachirumanisa mazino. 43 Panguva iyoyo vakarurama vachapenya zvakajeka sezuva+ muUmambo hwaBaba vavo. Ane nzeve ngaanzwe. 44 “Umambo hwekudenga hwakafanana nepfuma yakavanzwa musango, yakawanikwa nemunhu ndokuiviga; uye nekufara kwaanoita, anoenda otengesa zvinhu zvese zvaainazvo otenga sango iroro.+ 45 “Zvakare Umambo hwekudenga hwakafanana nemunhu anoita basa rekufamba achitengesa, achitsvaga maparera akanaka kwazvo. 46 Paakawana parera rimwe chete raikosha kwazvo, akaenda, akakurumidza kutengesa zvinhu zvese zvaakanga ainazvo, akaritenga.+ 47 “Zvakare Umambo hwekudenga hwakafanana nemambure ekukukudzisa akadzikiswa mugungwa achibata hove dzemarudzi ese. 48 Paakazara, vakaakwevera pamhenderekedzo, uye vagara pasi, vakaunganidza dzakanaka+ vachiisa mumidziyo, asi vakarasa dzisina kukodzera.+ 49 Ndizvo zvazvichange zvakaita pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva iyoyo.* Ngirozi dzichabuda dzobvisa vakaipa pakati pevakarurama 50 uye dzichavakanda muvira remoto. Imomo ndimo mavachachema vari vachirumanisa mazino. 51 “Manzwisisa zvinhu zvese izvi here?” Ivo vakati kwaari: “Hongu.” 52 Iye akabva ati kwavari: “Kana zvakadaro, murayiridzi mumwe nemumwe, paanodzidziswa nezveUmambo hwekudenga, akafanana nemunhu, tenzi wemba, anobudisa zvinhu zvitsva nezvitsaru mudura rake repfuma.” 53 Jesu paakapedza mifananidzo iyi, akabva ipapo. 54 Paakasvika kumusha kwake,+ akatanga kuvadzidzisa musinagogi ravo, zvekuti vakashamiswa, vakati: “Munhu uyu akawana kupi uchenjeri uhwu nemabasa esimba aya?+ 55 Uyu haasi iye mwanakomana wemuvezi here?+ Amai vake havanzi Mariya here, uye vanin’ina vake Jakobho naJosefa naSimoni naJudhasi here?+ 56 Uye hanzvadzi dzake, hadzisi pakati pedu here? Saka munhu uyu akazviwana kupi zvese izvi?”+ 57 Saka havana kumutenda.*+ Asi Jesu akati kwavari: “Muprofita anokudzwa kumwe kwese asi kwete kumusha kwake uye mumba make.”+ 58 Uye haana kuita mabasa esimba mazhinji imomo nekuda kwekusava kwavo nekutenda.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “pakutanga kwenyika.”